XOG DEG DEG AH: Maxaad ka og tahay Ciidamada Sirdoonka Puntland oo fashiliyey weeraro lagu khaarajin lahaa M/weyne Farmaajo? | Puntlandi.ca
Home Puntland XOG DEG DEG AH: Maxaad ka og tahay Ciidamada Sirdoonka Puntland oo fashiliyey weeraro lagu khaarajin lahaa M/weyne Farmaajo?
XOG DEG DEG AH: Maxaad ka og tahay Ciidamada Sirdoonka Puntland oo fashiliyey weeraro lagu khaarajin lahaa M/weyne Farmaajo?
Waxaa Qoray: Garaad Axmed Jaamac on January 14, 2018.
Wararka laga helayo magaalada Boosaaso ayaa cadeynaya in ay ciidamada Sirdoonka ee dawladda Puntland labo maalmood ka hor booqashadii Madaxweyne Farmaajo ee Boosaaso ay fashiliyeen, weeraro Argagixiso oo la doonayey in lagu carqaladeeyo booqashada Madaxweynaha ee gobalka Barrio o ahayd lugtiisii ugu dambeysay ee Waqooyiga fog Soomaaliya.
Shabakado Argagixiso ayaa diyaariyey labo baabuur, oo ay ka buuxiyeen waxyaabaha qarxa, waxaana ujeedoodu ahayd in ay weeraraan wafdiga ama gaadiidka Madaxweynaha haddii ay jaanis u helaan.
Laamaha Sirdoonka ayaa ku guuleystay in ay helaan meel laga dabagali karro kooxahan Argagixiso, waxaana gacanta lagu soo dhigay labo kamid ah baabuurtii ay adeegsanayeen iyo dadkii weeraradaas fulin lahaa oo hadda ku jira gacanta ciidamada Amniga.
Saraakiisha Sirdoonka ayaa gabi ahaanba diiday in ay xogahan banaanka u baxaan, iyagoo cabsi ka qabay in khal-khalgalin Amni ay timaado, waxaana taasi ay kaga guuleysteen kooxaha Argagixisada ah.
Puntlandi.ca ayaa helay xogtan waxaana muujinaysaa in ay soo bandhigayaan Taliska ciidamada Sirdoonku shabakadahan Argagixiso oo ka hadlaya waxyaabaha ay qaban lahaayeen, taas oo ah guul laga gaaray kooxahan.
Howlgalo qorsheysan ayaa sidaas oo kale lagu qaaday goobo kale oo ay galeen tuhumo kala gedisan, waxaana lasoo qabtay shaqsiyaad la tuhmay laakiin ugu dambeyntii lasii daayey sidda ay sheegayaan wararka laga helayo Laamaha Amniga.
Kooxaha Argagixiso ee Daacish & Al- Shabaab ayaa dagaal kula jira ciidamada Puntland, waxayna Sirdoonku si dhaw ula socdaan dhaqdhaqaaqyo kasta oo ay sameeyaan kooxahan Argagixiso, iyadoo looga guuleystay dagaalka muuqda iyo midka Qarsoon-ba.
Puntland ayaa heegan sare galisay ciidamadeeda, waxaana heerkii ugu sareeyey la galiyey la socodka dhaqdhaqaaqyada Argagixiso iyo cid kasta oo isku dayi karta falal amaan darro, taas oo kaliftay in wafdigan baaxada weynaa ay nabad ugu mashaaxaan deegaanada Puntland.
XOGTAN: WAXAY GAAR U TAHAY PUNTLANDI.CA